जनता समाचारमा बुधवार प्रकाशित समाचार सार « Janata Samachar
जनतासमाचार डट्कममा आज (बुधवार) प्रकाशित समाचारका मुख्य अंशहरू :
१. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टी एकताको पक्षमा नरहेको बताउनुभएको छ । गौतमले ओली समूहका सबै नेताहरु पार्टी एकताको पक्षमा भएपनि ओली एकताको विपक्षमा भएको बताउनुभएको हो ।
२.नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा ) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज डाक्टर भीम रावलले जनप्रदर्शनमा होमीन युवालाई निर्देशन दिनुभएको छ । धनगढी स्थित प्रदेश पार्टी कार्यालयमा प्रदेशका युवाहरुको भेलालाई सम्बोधन गर्दै डाक्टर रावलले असंवैधानिक प्रतिगमनका विरुद्ध युवाहरु एकताबद्ध भएर लाग्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
३.नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा धर्ना कार्यक्रम गरेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल पक्षका विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य, संविधानसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा धर्ना कार्यक्रम गरेका हुन् ।
४.गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आदिवासी र जनजातीको अबको आवश्यकता समृद्धि हासिल गर्नु रहेको बताउनुभएको छ । आदिवासी र जनजातीका विगतका समस्याहरु आधारभूत रुपमा हल भइसकेको बताउँदै गृहमन्त्री थापाले अबको आवश्यकता समृद्धि हासिल गर्नु रहेको बताउनुभएको हो ।
५.प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू जनजाती विरोधी नभएको बताउनुभएको छ । कुनैबेला ओली जनजाती विरोधी भएको हल्ला फैलाइएको भन्दै उहाँले यथार्थमा आफू विरोधी नभएको बताउनुभएको हो । आदिवासी जनजाति महासंघको आयोजनामा राष्ट्रिय सभागृहमा भएको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था दोबाटोमा फसेको बताउनुभयो ।
६.गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आदिवासी र जनजातीको अबको आवश्यकता समृद्धि हासिल गर्नु रहेको बताउनुभएको छ । आदिवासी र जनजातीका विगतका समस्याहरु आधारभूत रुपमा हल भइसकेको बताउँदै गृहमन्त्री थापाले अबको आवश्यकता समृद्धि हासिल गर्नु रहेको बताउनुभएको हो ।
७.सर्वोच्च अदालतमा चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा दायर भएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा दायर भएको हो । अधिवक्ता धनजीत बस्नेतले पूर्वप्रधान्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको हो ।
८. वरिष्ठ मुटु सर्जन डा रामेश कोइरालाले कोरोनाविरुद्धको खोप ढुक्क भएर लगाउन आग्रह गर्नुभएको छ । कोरोनाविरुद्धको पहिलो चरणको खोप लिँदै डा कोइरालाले खोप लगाएर सुरक्षित बन्न आग्रह गर्नुभएको हो । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा ट्वीट गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, ‘कोभिडको काेभिसिल्ड खोपको पहिलो डोज बिना कुनै शंका, बिना कुनै डर लगाइयो। खोप लगाऔँ, सुरक्षित रहौँ ।’
९.प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप सबैको पहुँचमा पुर्याउन सरकार प्रतिवद्द रहेको बताउनुभएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट कोरोना खोप अभियानको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले तीन महिनाभित्र सबै नेपालीलाई निशुल्क कोरोना खोप उपलब्ध हुने बताउनुभयो । ‘करिब तीन महिनाभित्र हामीले सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई खोप उपलब्ध गराइसक्ने छौं’, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।
१०.विर्तामोडस्थित अनारमनी स्वास्थ्य केन्द्रबाट पहिलो चरणको कोरोनविरुद्ध खोप अभियान शुरु भएको छ । लावण्य स्कीन हेल्थ केयर सेन्टरका डा. हेमन्त राठीले पहिलाे खोप लगाएर अभियान शुरु गर्नुभएको हो ।
११.निर्वाचन आयोगले जिल्ला–जिल्लामा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न शुरु गरेसँगै इलाममा पनि काम अघि बढाइने भएको छ । आयोगले आउँदो १५ देखि २१ गतेसम्म देशका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न लागेको हो।
१२.मंगलवार राजधानीबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाले पनि फरक–फरक विषयका समाचारलाई महत्वका साथ छापेका छन् । पत्रिकाहरूमा ‘संसदलाई मार्ने कार्यकारी होइनन्’, प्रधानन्यायाधीशका प्रश्नै-प्रश्न र कोरोनाविरुद्दको खोप आजदेखि लगायतका शीर्षकमा प्रमुख समाचार प्रकाशित गरिएका छन् ।
१३.वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदमबाट संविधानकै अन्त्य हुने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ । मंगलबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा महतोले प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक रहेको भन्दै पुनस्र्थापनाका पक्षमा बहस गर्नुभएको हो ।
१४.दक्षिण कोरियामा पहिलोपटक एक बिरालोमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । ख्याङ्सान जिन्जुस्थित एक बस्तीमा रहेको घरपालुवा बिरालोमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको हो । दक्षिण कोरियामा मानिसबाहेक जनावरमा कोरोना संक्रमण भेटिएको यो पहिलो घटना हो ।
१५.राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले देशकाे पूँजी अपर्याप्तताका कारण एमसीसी आवस्यक भएकाे बताउनुभएकाे छ । एमसीसी सहायता नआए सरकारले आफ्नै लगानीमा भएपनि परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै कँडेलले परियाेजना निर्माणमा देशकाे पूँजीले नपुग्ने भएकाले एमसीसी आवस्यक हुने बताउनुभएकाे हाे।
१६.बढ्दो शीतलहर तथा चिसोलाई मध्यनजर गरी सिरहा नगरपालिकाले बुधवारदेखि तीन दिन नगर क्षेत्रका विद्यालयमा बिदा दिएको छ । बाक्लो हुस्सु र शीतलहरका कारण जनजीवन प्रभावित हुन थालेपछि चिसो छल्न सिरहा नगरपालिकाले आजदेखि शुक्रबारसम्म नगर क्षेत्रका सबै विद्यालयमा बिदा दिएको हाे ।
१७.आजभोलि घर बाहिर खाजा खाँदा प्राय सिल्भर पेपरले बेरिएका खाजा खाइन्छ । सिल्भर पेपरले बेरेको खानेकुरा हामी स्वाद मानिमानि खाइरहेका हुन्छौँ । तर सिल्भर पेपरमा बेरिएका ताता खानेकुरा मानव स्वास्थ्यका निम्ति निकै खतरनाक मानिन्छ । यसबारे हामीले समयमै सचेत हुनुपर्ने विशेषज्ञहरु बताउँछन् ।
१८.नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा ) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज डाक्टर भीम रावलले जनप्रदर्शनमा होमीन युवालाई निर्देशन दिनुभएको छ । धनगढी स्थित प्रदेश पार्टी कार्यालयमा प्रदेशका युवाहरुको भेलालाई सम्बोधन गर्दै डाक्टर रावलले असंवैधानिक प्रतिगमनका विरुद्ध युवाहरु एकताबद्ध भएर लाग्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
१९.जिल्लामा ट्रकको ठक्करबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ । इलामबाट झापा जाँदै गरेको को १८ प ६९७ नम्बरको मोटर साइकललाई ना ३ ख २७३२ नम्बरको ट्रकले पछाडीबाट ठक्कर दिँदा माईजोगमाई गाँउपालिका–३ की २६ वर्षीय सन्जु आचार्यको मृत्यु भएको हो ।
२०. नेपाल रत्न तथा आभुषण संघले डायमण्ड परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गर्ने भएको छ । नेपालमा जेम्स ल्याब नभएका कारण डायमण्ड परीक्षणका लागि विदेश पठाउनुपर्ने स्थितिलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले संघले नेपालमै जेम्स ल्याब स्थापना गर्न लागेको हो ।
२१. जिल्लामा रहेका नौ व्यावसायिक फर्मलाई कारबाही गरिएको छ । मूल्यसूची नराखेका र दर्ता कागजात नभएका व्यावसायिक फर्मलाई कारबाही गरिएको हो ।
२२.नेपालमा काेराेनाविरूद्धकाे खाेप अभियान शुरू भएकाे छ । अभियान अन्तर्गत पहिलाे चरणकाे खाेप देशभर एकसाथ शुरू गरिएकाे हाे । सरकारले पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, शवबहानचालक, सफाइकर्मी लगायतलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन शुरु गरेकाे छ । पहिलाे चरणअन्तर्गत १२ हजार व्यक्तिले खाेप लगाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएकाे छ ।
२३.बालिका बिक्री गर्न भारततर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिका–१२ बस्ने ३५ वर्षीय मनोज महतोलाई मंगलबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
२४. सरकारले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले वैज्ञानिक वनको नाममा अवैध रुपमा रुख कटान हुने अवस्थालाई रोक्न ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरिएको बताउनुभएकाे हाे।
२५.चीनमा कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमतिहरु प्रत्येक दिन जसो भेटिन थालेका छन् । यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीका अनुसार पछिल्ला केही दिनयता चिनका प्रत्येक दिन कोरोना संक्रमित भेटिन थालेका हुन् ।
२६.नेपालकी ट्रान्सजेन्डर मोडल अन्जली लामा हलिउड चलचित्रमा अभिनय गर्ने भएकी छन् । मोडल लामाले ‘सेयरिङ ए राइड’ नामक चलचित्रमा अभिनय गर्न लागेकी हुन् ।
२७. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा धर्ना कार्यक्रम गरेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल पक्षका विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य, संविधानसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा धर्ना कार्यक्रम गरेका हुन् ।
२८.सपना मानिसको जिवनको एक भाग हो । प्राय हामी सुतेको समयमा सपना देख्छौँ । स्वप्नशास्त्रका अनुसार सबै सपनाका आ–आफ्नै महत्व र अर्थ हुन्छन् । सपनाले भविष्यमा हुने कुनै घटनाका बारेमा संकेत दिइरहेका हुन्छन् । अनेक प्रकारका सपना देख्छौँ । ती मध्ये कहिले जिउँदो मानिस मरेको सपना देख्छौँ भने कहिले मृत्यु भइसकेका मानिस सपनामा आएको देख्छौँ ।
२९. त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जले जनशक्ति माग गरेको छ। अस्पतालले विभिन्न पदका लागि १२ जना जनशक्तिका लागि दरखास्त आव्हान गरेको हो । अस्पतालले हाडजोर्नी विभागको लागि दुई, सामान्य चिकित्सा विभागका लागि दुई, एनेस्थ्रेसियोलोजी विभागका लागि दुई, मानसिक रोग विभागका लागि एक, बालरोग विभागका लागि दुई, प्याथोलोजी विभागका लागि एक र महिला तथा स्त्रीरोग विभागका लागि दुई गरी १२ जना कर्मचारी माग गरेरको सूचना बुधवारकाे गाेरखापत्रमा प्रकाशित छ ।